Umeluleki we-Concrete Grinder - iSearch
Qala Wena ithuluzi Umeluleki we-Concrete Grinder
Kunamathuluzi amaningi omkhaya umuntu angazi ukuthi angayisebenzisa kanjani kuze kube yilapho kukhona isizathu sokusebenza nabo. Abaguni bekhonkolo bawela ngalesi sigaba. Ziyithuluzi eliwusizo kakhulu elingenza umsebenzi ube nzima kakhulu. Kodwa azisetshenzisiwe kaningi, yingakho ngokuvamile engekho kuhlu lwamathuluzi asekhaya awusizo kakhulu namadivayisi. Kungenzeka ukuthi awunawo grinder yekhonkrithi egaraji noma kumishini yakho yokuchitha.
Ngaphezu kwalokho, kuvame ukungaqondi kahle ukuthi lokhu kuyithuluzi elikhulu, elinamandla, okungaphezulu kwezinhloso zezimboni kunokusetshenziswa kwekhaya. Uma ujwayele ukugaya izikhonkwane, ungase ube namathuba amaningi okubahlanganisa nabasebenzi bokwakhiwa kunokuba nesikhathi sokuchitha isikhathi seviki ezayo. Nokho, eqinisweni, kulula ukuyisebenzisa lo mshini ngokwawo. Izinguqulo ezincane zinesisindo esincane nesingathintwayo eziguqukayo lula ukuphathwa futhi wenze ukusetshenziswa kwezinga eliphezulu lokuthuthukiswa kwekhaya kungenzeka.
Amathuba lapho, nokuthi umshini ungasetshenziswa kanjani ngempela, uhlukile kakhulu kunalokho umuntu angacabanga. Njengoba igama lisho ukuthi, livame ukusetshenziselwa ukusika izikhonkwane zekhonkri, noma ukulungiselela ukwelashwa okunye noma ukuwashisa. Kodwa-ke, i-grinder yekhonkrit ingasetshenziswa nasemaceleni e-marble, noma ukubhebhetheka emaphethelweni noma ezindaweni ezise-steino.
Ivame ukusetshenziselwa kakhulu kakhulu ekwakhiweni kwegaraji lesiteji. Amagareji adinga ukugcinwa okwengeziwe kunokuba abathengi abaningi bazi. Ngakolunye uhlangothi, ukungcola nokuthuli kuqoqa kalula. Kubalulekile futhi, Umswakama egaraji ukuvimbela, njengoba lokhu kungaholela ezinkingeni ezihlukahlukene. Kodwa zonke ezinye izinkinga ngegaraji zingathinteka phansi, ngendlela yokungcola, ukuphahlazeka nokunye okunjalo.
Uma izinkinga ezinjalo ziphakama, noma ngisho nangaphambi kokuba zenze, sekuyisikhathi sokulungisa emhlabathini. Ngokuvamile kusho ukuhlanza (nge-broom enkulu noma uma kunokwenzeka umhlanzi ophezulu wokucindezela), ukwelashwa ngomshini wokukhanda ukhonkolo bese upende phansi, Uma ugaya phansi, kufanele uqiniseke ukuthi lokhu kwenziwa ngokunyakaza komzimba. Ukunyakaza okuyiyindilinga kungase kubonakale kungokwemvelo futhi kuphumelele kodwa kuholele emaphethini okugcina okungapheli emhlabathini, ngisho nangemva kokudweba kokugcina.
Ukuze uthole imisebenzi ekhethekile, leli thuluzi liyabonakala liwusizo futhi lilula.
Isihloko esilandelayoUphethiloli leaf cleaner